I-bezel yangempela ene-mount ye-BlackBerry 9220 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
I-bezel yangempela ene-mount ye-BlackBerry 9220 Curve
Ingaphambili, ingxenye emele kakhulu yecala, nguye onquma ukubukeka kwe-smartphone: ubunono, isitayela kanye nomklamo. Ngokufaka entsha esikhundleni se-bezel egugile, ngeke nje uvuselele i-BlackBerry yakho, kodwa futhi ukhiphe ukukhuluma okuxakayo kwama-opharetha angaphandle! Ikhiqizwa ngu-BlackBerry.
I-bezel yasekuqaleni (iphaneli yangaphambili) ye-BlackBerry 9220 ingaphambili, ingxenye emele kakhulu yecala, yiyona enquma ukubukeka kwe-smartphone: ubunono, isitayela kanye nomklamo. Ngokufaka entsha esikhundleni se-bezel egugile, ngeke nje uvuselele i-BlackBerry yakho, kodwa futhi ukhiphe ukukhuluma okuxakayo kwabaqhubi bakwamanye amazwe! Leli bhande lekhanda lakhiwe yi-BlackBerry, okuyisiqinisekiso sekhwalithi.
Irimu ye-— iyinxenye eyisipele evame ukushintshwa ye-BlackBerry. Ukushintsha i-bezel ye-— kuwumsebenzi owenziwa ochwepheshe bethu “ngaso leso sikhathi”, futhi ngeke kudingeke ukuthi uhlukane nedivayisi isikhathi eside. Funda kabanzi ekhasini le-Njengoba ezothatha isikhundla usebe.
Kuleli khasi, i-bezel ingeye-9220 kuphela, ehambisana nokuma nendawo yezingxenye ezincane. Ingabe unayo i-9320/9315/9310? Nakhu :) → Usebe original ngaphandle logo opharetha ukukhweza i-BlackBerry 9320 Ijika.
I-bezel yangempela ene-mount ye-BlackBerry 9220 Curve, Mnyama 9220BEZEL-O-BK ●
I-bezel yangempela ene-mount ye-BlackBerry 9220 Curve, Emhlophe 9220BEZEL-O-WT ●